qadarka of credit
dheer Loan bilihii
lacagaha kala duwan
Ku qor cadadka iyo muddada deynta, dulsaarka iyo nooca lacag bixinta.
calculator The xisaabin doonaa qadarka lacagta, deynta iyo kharashka credit.
Dad badan oo loogu talagalay iibsadaan deyminyeyso adeegyada. Bangiyada iyo ururada non-bangiga bixiyaan heli amaah ah noocyo kala duwan oo xaaladaha. Marka aad qaadato amaah weyn, tusaale ahaan, si ay u iibsadaan guri, gaari, amaah ah inuu guri u dhiso, ama horumarinta ganacsigooda, waxaa muhiim ah in la ogaado in amaah this waxaad awoodi doontaa in la sameeyo waxay noqon doonaan. Si aad u hubiso of dooranaya barnaamij credit a, waxaan ku siin in aad isticmaasho calculator amaah our. Gala ee beeraha ku haboon lacagta amaahda, muddada bixinta amaah bilood iyo dulsaarka ah, iyo sidoo kale sheeg nooca bixinta - magdhow ama faraqa, oo aad ka heli karto oo qeyb ka mid ah lacagaha amaah ah waxaa loo isticmaalaa in abaalmarin daymaha iyo inta si ay u bixiso danta on deynta, dheelitirka ay deynta by bilood, size ee dheeraadka ah sida bil ah, iyo muddo deynta oo dhan, iyo dulsaarka dhabta ah amaah ah.
Marka hab kala duwan ee bixinta daymaha lacagta amaahda ah oo amaah ah ugu qaybsan yahay saamiyada loo siman yahay. saamiyada Kuwani koobnaan bulk oo ka mid ah lacagta bil kasta. Qaybta haraaga ah wakiil xiiso on dheelitirka la bixin on amaahda. Sidaas bil ka bil lacagta hoos size.
In habkan of bixinta amaahda waxaa jira cillado.
Chief iyaga ka mid ah waa xaqiiqada ah in si amaah ah kula bixinta daymaha macnaheedu waa ka sii adag tahay in la helo.
Bank tirinta lacagta ugu badan ee amaahda ku saleysan in amaahdaana waa inay awoodaan inay bixiyaan lacagta wajigeeda hore. Taas macnaheedu waa in ay u helaan amaah noocan oo kale ah waxaa loo baahan yahay in ay leeyihiin dakhli ku filan oo sare. Xaaladaha qaarkood, waxa ku caawin kara damiin damiin ama co-deynsanaya jiidashada.
khasaare kale waa in qeybtii hore ee muddada lacagta amaahdaana si gaar ah u daran. Haddii aynu ka hadlayno amaah weyn u noqon kartaa rar culus for amaahdaana. Laakiin mustaqbalka khasaaro this noqon kartaa sharaf. Sicir iyo hoos lacagaha dulsaarka dhigay yar culaab.
At hab magdhow ah bixinta daymaha amaah wuxuu u qaybsan yahay qaybo siman ee ma aha oo kaliya xaddiga daynta, laakiin sidoo kale danaha waxa on muddo ah amaah dhan. Sidaas darteed, wax amaahdaana bixinaya qaaraan siman ugu weyn mudada lacag bixinta. Maanta, habkan of lacagta loo isticmaalo by ugu bangiyo ganacsi. Faa'iida weyn ee macaashka waa in cadadka lacag amaah ah uu noqon doono ka badan in nidaamka kala. In lacagta magdhowga waxaa dheer habka loo maleeyo in qeybtii hore ee xilli amaah ah aad bixiso inta dulsaarka amaahda. Laakiin wadarta weyn ee daynta muddo this hadhay ku dhawaad Sucuudiga.
Haddii aad rabto in aad qaadato credit for lacag aad u badan oo aysan qorshaynaynin in ay Dhicis abaalgudo, idin aqbali doonaa amaah ah nidaamka lacag bixinta magdhow.
Xaaladaha kale, gaar ahaan marka ay timaado deynta muddada dheer, waxa fiican in aad doorato bangi oo bixiya amaahda kula lacagaha kala duwan.